जसपा कार्यकारिणी समिति बैठक परिचयमै दिनभर : RajdhaniDaily.com -
Home राजनीति जसपा कार्यकारिणी समिति बैठक परिचयमै दिनभर
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समिति बैठक हिजो बुधबारदेखि सुरु भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच गत १० वैशाखमा रातारात एकीकरण गरेर जसपाको घोषणा भएको थियो । पार्टी एकीकरण पछि पहिलो पटक बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठक ६ दिनसम्म चल्नेछ ।
पार्टी एकीकरण पश्चात बसेको पहिलो बैठकको पहिलो दिन परिचय कार्यक्रम गरेर सकिएको छ । जसपा कार्यकारिणी सदस्य मनिषकुमार सुमनले पहिलो बैठकको पहिलो दिन परिचय गरेर सकिएको बताए । बिहिबार बिहान ११ बजे पुनः बैठक बस्ने गरी सकिएको बताउँदै परिचय लामो समयसम्म चलेको बताए ।
‘पहिलो बैठकको पहिलो दिन भएकाले शुरुमा २÷३ मिनेट भित्रमा परिचय दिन भनिएको थियो’ सुमनले भने, ‘तर म यो आन्दोलन, त्यो आन्दोलन, यो संगठन, त्यो संगठन, यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा भन्दै दिनभर त्यसैमा बित्यो, भोली (बिहिबार) देखीको बैठकमा नियमित एजेण्डामा छलफल हुन्छ ।’
जसपा नेता प्रकाश अधिकारीका अनुसार पार्टी एकीकरण÷समायोजन निर्देशिका, राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक कार्ययोजना, समसामयिक राजनीति लगायतका बिषयमा छलफल हुने एजेण्डा तय गरिएको बताए ।
बैठक जसपा अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष ठाकुर, यादव र वरिष्ठ नेतात्रयमा अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो रहेका छन् । अन्य नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा वरियता चयन यही बैठकबाट हुने बताईएको छ ।
जसपा विधान अनुसार ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । तर यहाँ दुई जना अझै चयन गर्न बाँकी छ । यही कार्यकारिणीमा रहेका सदस्यहरु नै पदाधिकारी हुनेछन् । वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव, सचिव, प्रवक्ता लगायतका पदाधिकारी आवश्यक्ता अनुसार चयन गरिने विधानमा व्यवस्था छ । यि पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य भएकाले मात्रै पाउँनेछन् ।
राजेन्द्र श्रेष्ठ र लक्ष्मणलाल कर्णको दुई सदस्य कार्यदलले समायोजनको मापदण्ड सहितको प्रतिबेदन नेतृत्वलाई बुझाईसकेको र सो प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गर्दै समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउँने जसपाले जनाएको छ । पार्टी एकीकरणकै बेला नै समान्ताका आधारमा संगठन समायोजन गर्ने सहमती भएको थियो ।
शिर्ष नेताहरुका बीचमा जसपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने सहमती भएको छ । यसमा कुनै किसिमको विवाद नभएको जसपा स्रोतको दावी छ । संघीय परिषद १ हजार १ सय १ सदस्य रहने बिषयमा समेत सहमती जुटिसकेको छ । यस्तै संसदीय दलको नेतामा महतोलाई चयन गरिने बताईएको छ ।
१ हजार १ सय १ को संघीय परिषद्, ७ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, १ सय १ सदस्यीय राजनीति समिति बनाउँन शिर्ष नेताहरुका बीचमा गृहकार्य भएको छ । तत्कालीन समाजवादीमा २५ पदाधिकारी र ४ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य थिए । तत्कालीन राजपामा पदाधिकारीको संख्या १ सय ३५ र केन्द्रीय सदस्य ८ सय रहेको बताईएको छ ।
यसका साथै पार्टीका केन्द्रीय तहका अन्य निकायहरु सल्लाहकार, विज्ञ परिषद्, निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोगका साथै पार्टीका विभाग, प्रदेश परिषद्, प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना, प्रदेश सल्लाहकार समिति, प्रदेश विज्ञ परिषद, प्रादेशिक आयोगहरु, गैरभगोलिक विशेष प्रदेश समितिलगायत स्थानीय तहका संरचना टुंगो लगाउन अझै बाँकी नै छ । यि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जसपा महाधिबेशनमा जान्छ । तर महाधिबेशन कहिले गर्ने, सिद्धान्त, विचार आदी बिषयमा अझै केही टुंगो लागेको छैन् ।
काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले सरकारले वृद्धि गरेको तलब चालू आर्थिक वर्षको सुरु (गत १ साउन)देखि नै नपाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी...
समाजमा सबैको चिन्ता छ, फेरि कोरोना बढ्यो । लामो समयपछि लयमा आएका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्र फेरि धरासायी हुने भए । जीवन जोगाउन मुस्किल...
Breaking News Kumar Raut - September 17, 2020 0
बिचार Kumar Raut - January 13, 2021 0
काठमाडौं । लगातार दुइ दिन घटेकाे शेयर बजारमा फेरी उत्साह थपिएकाे छ । मंगलबार नेप्से सूचक ९२.४६ अंकले बढेर २५९९९.०७ विन्दुमा आइपुगेको छ । बजार...
बिचार Kumar Raut - April 7, 2020 0
विश्वव्यापी महामारीको रूप लिँदै गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत १० चैत्रदेखि गर्दै आइरहेको लकडाउनलाई आगामी ३...
Not-to-be-missed Kumar Raut - January 16, 2021 0
मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन गर्छौं : मन्त्री भट्टराई
भीमदत्तनगर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । भीमदत्तनगरपालिका–१६ स्थित बन्द अवस्थामा रहेको...
करेन्ट लागेर सोलुखुम्बुका वडाध्यक्षको मृत्यु
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - September 22, 2020 0
सोलुखुम्बु । माप्य दूधकोशी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष निमराज तामाङको निधन भएको छ । आज बिहान आफ्नै घरमा करेन्ट लागेर घाइते भएका ३९ वर्षीय तामाङको...
प्रदेश २ Dhruba Lamsal - February 13, 2021 0
Breaking News Kumar Raut - November 23, 2020 0